02.08.20 Avyakt Bapdada Nepali Murli 01.03.86 Om Shanti Madhuban
होलीहंस बुद्धि , वृत्ति , दृष्टि र मुख
आज बापदादाले सर्व होली हंसहरूको सभालाई देखिरहनु भएको छ। यो साधारण सभा होइन। रूहानी होली हंसहरूको सभा हो। बापदादाले हरेक होली हंसलाई देखिरहनु भएको छ– सबै कहाँसम्म होली हंस बनेका छन्? हंसको विशेषतालाई राम्रोसँग जानेका छौ? सबैभन्दा पहिला हंस बुद्धि अर्थात् सदा हरेक आत्मा प्रति श्रेष्ठ र शुभ सोच्नेवाला। होली हंस अर्थात् कंकड र रत्नलाई राम्रोसँग पहिचान गर्नेवाला र फेरि धारण गर्नेवाला। पहिला हरेक आत्माहरूको भावलाई पहिचान गर्नेवाला र फेरि धारण गर्नेवाला। कहिल्यै पनि बुद्धिमा कुनै पनि आत्मा प्रति अशुभ वा साधारण भाव धारण गर्नु हुँदैन। सदा शुभ भाव र शुभ भावना धारण गर्नु छ। भावलाई जान्नाले कहिल्यै पनि कसैको साधारण स्वभाव वा व्यर्थ स्वभावको प्रभाव पर्दैन। शुभ भाव, शुभ भावना जसलाई भाव स्वभाव भन्छौ, जुन व्यर्थ छ त्यसलाई बदल्नु पर्ने हुन्छ। बापदादाले देखिरहनु भएको छ– यस्ता हंस बुद्धि कहाँसम्म बनेका छन्? यसैगरी हंस वृत्ति अर्थात् सदा हरेक आत्मा प्रति श्रेष्ठ कल्याणको वृत्ति। हरेक आत्माको अकल्याणको कुरा सुनेर, देखेर पनि अकल्याणलाई कल्याणको वृत्तिद्वारा परिवर्तन गरिदिनु छ– यस्तोलाई भनिन्छ होली हंस वृत्ति। आफ्नो कल्याणको वृत्तिद्वारा अरूलाई बदल्न सक्छौ। उसको अकल्याणको वृत्तिलाई आफ्नो कल्याणको वृत्तिद्वारा परिवर्तन गरिदिनु– यही होली हंसको कर्तव्य हो। त्यस्तै दृष्टिमा सदा हरेक आत्मा प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेहको दृष्टि होस्। जस्तोसुकै होस् तर आफ्नो तर्फबाट सबै प्रति रूहानी आत्मिक स्नेहको दृष्टि धारण गर्नु, यसलाई भनिन्छ होली हंस दृष्टि। यस प्रकार बोलीमा पनि पहिला सुनाइएको छ, खराब बोली अलग चीज हो। त्यो त ब्राह्मणहरूको बदलिएको छ तर व्यर्थ बोलीलाई पनि होली हंस मुख भनिँदैन। मुख पनि होली हंस मुख होस्। जसको मुखबाट कहिल्यै व्यर्थ ननिस्कियोस्, यसलाई भनिन्छ– हंस मुख स्थिति। त्यसैले होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि र मुख। जब यी पवित्र अर्थात् श्रेष्ठ बन्छन् तब स्वत: नै होली हंसको स्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ। त्यसैले सबैले आफूले आफैंलाई हेर– कहाँसम्म सदा होली हंस बनेर चल्छु? किनकि स्व-उन्नतिको समय धेरै रहेको छैन, त्यसैले आफूले आफैँलाई चेक गर र परिवर्तन गर।
यस समयको परिवर्तनले लामो समयको परिवर्तित गोल्डन दुनियाँको अधिकारी बनाउँछ। यो इसारा बापदादाले पहिला पनि दिनु भएको छ। स्वतर्फ डबल अन्डर लाइनको ध्यान सबैको छ? थोरै समय ध्यान दिनाले बहुतकालको ध्यानको फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्तिको प्रारब्ध बन्छ। त्यसैले यो थोरै समय धेरै श्रेष्ठ र रमाइलो छ। मेहनत पनि छैन केवल जे बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो धारण गर्नु छ। धारणा गर्नाले त्यो प्राक्टिकल स्वत: नै हुन्छ। होली हंसको काम नै हो धारण गर्नु। त्यसैले यस्ता होली हंसको यो सभा हो नि। ज्ञानी बनिसक्यौ। व्यर्थ वा साधारणलाई राम्रोसँग बुझिसक्यौ। बुझिसके पछि कर्ममा स्वत: नै आउँछ। त्यसै पनि साधारण भाषामा यही भन्छौ नि– बल्ल मैले बुझेँ। त्यसपछि नगरी रहन सक्दैनौ। त्यसैले पहिला यो जाँच गर– साधारण वा व्यर्थ के हो? कहिलेकाहीं व्यर्थ वा साधारणलाई नै श्रेष्ठ त सम्झँदैनौ? त्यसैले सबैभन्दा पहिला मुख्य हो होली हंस बुद्धि। त्यसमा स्वत: नै पहिचान गर्ने शक्ति आउँछ किनकि व्यर्थ संकल्प र व्यर्थ समय तब जान्छ जबसम्म त्यसको पहिचान हुँदैन– यो सही हो वा गलत हो भनेर। आफ्नो व्यर्थलाई, गलतलाई सही सम्झन्छन् त्यसैले नै समय धेरै व्यर्थ जान्छ। हुन्छ व्यर्थ तर सम्झन्छन्– मैले समर्थ र सही सोचिरहेको छु। जे मैले भन्छु त्यही सही हो। यसैमा पहिचान गर्ने शक्ति नभएको कारणले मनको शक्ति, समयको शक्ति, वाणीको शक्ति सबै खेर जान्छ अनि अरूबाट मेहनत लिने बोझ पनि चढ्छ। कारण? किनकि होली हंस बुद्धि बनेका छैनन्। त्यसैले बापदादाले सबै होली हंसहरूलाई फेरि यही इसारा दिइरहनुहुन्छ– उल्टोलाई अझ उल्टो नगराऊ। यो छ नै उल्टो यस्तो नसोच तर उल्टोलाई कसरी सुल्टो बनाउने– यस्तो सोच। यसलाई भनिन्छ कल्याणको भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावनाले आफ्नो व्यर्थ भाव-स्वभाव र अरूको भाव-स्वभावलाई परिवर्तन गरेर विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। बुझ्यौ! पहिला स्वमाथि विजयी, फेरि सर्वमाथि विजयी, फेरि प्रकृतिमाथि विजयी बन्नेछौ। यी तीनै विजयले तिमीलाई विजय मालाको दाना बनाउने छ। प्रकृतिमा वायुमण्डल, वायब्रेशन वा स्थूल प्रकृतिका समस्याहरू सबै आउँछन्। त्यसैले यी तीनैमाथि विजय होस्। यही आधारमा विजय मालाको आफ्नो नम्बर हेर्न सक्छौ, त्यसैले नाम नै विजयन्ती माला राखिएको छ। सबै विजयी छौ त? अच्छा।
आज अस्ट्रेलियाको पालो हो। अस्ट्रेलियालाई मधुबनबाट पनि गोल्डन चान्सलर बन्ने चान्स मिल्छ किनकि सबैलाई अगाडि रहने चान्स दिन्छौ, यो विशेषता छ। अरूलाई अगाडि राख्नु, यस्तो चान्स दिनु अर्थात् चान्सलर बन्नु हो। चान्स लिने र चान्स दिने दुवैलाई चान्सलर भनिन्छ। बापदादाले सदा हरेक बच्चाहरूको विशेषता देख्नुहुन्छ र वर्णन गर्नुहुन्छ। अस्ट्रेलियामा पाण्डवहरूलाई विशेष सेवाको चान्स मिलेको छ। धेरै सेन्टरहरू पनि पाण्डवहरूले नै सम्हाल गर्छन्। शक्तिहरूले पाण्डवहरूलाई चान्स दिएका छन्। अगाडि राख्नेहरू सदा अगाडि नै रहन्छन्। यो पनि शक्तिहरूको महानता हो। तर पाण्डवहरूले आफूलाई निमित्त सम्झेर सेवामा अगाडि बढिरहेका छौ नि। सेवामा निमित्त भाव नै सेवाको सफलताको आधार हो। बापदादाले तीन शब्द भन्नुहुन्छ नि– जुन साकारद्वारा पनि अन्त्यमा उच्चारण गर्नुभयो। निराकारी, निर्विकारी र निरहंकारी। यी तीनै विशेषताहरू निमित्त भावबाट स्वत: नै आउँछन्। निमित्त भाव भएन भने यी तीनै विशेषताको अनुभव हुँदैन। निमित्त भावले अनेक प्रकारका मै-पन, मेरो-पनलाई सजिलै खतम गरिदिन्छ। न म, न मेरो। स्थितिमा जुन हलचल हुन्छ त्यो यही एउटा कमीको कारणले हुन्छ। सेवामा पनि मेहनत गर्न पर्छ र आफ्नो उड्तीकलाको स्थितिमा पनि मेहनत गर्न पर्छ। निमित्त हौ अर्थात् निमित्त बनाउनेवाला पनि सदा याद रहन्छ। त्यसैले यही विशेषताद्वारा सदा सेवाको वृद्धि गर्दै अगाडि बढिरहेका छौ नि। सेवाको विस्तार हुनु, यो पनि सेवाको सफलताको निशानी हो। अहिले अचल-अडोल स्थितिको राम्रो अनुभवी भएका छौ। बुझ्यौ– अस्ट्रेलिया अर्थात् केही एक्स्ट्रा छ, जुन अरूमा छैन। अस्ट्रेलियामा अरू किसिमका गुजराती आदि छैनन्। च्यारिटी बिगिन्स एट होमको काम धेरै गरेका छौ। आफू जस्तैलाई जगाएका छौ। कुमार-कुमारीहरूको राम्रो कल्याण भइरहेको छ। यो जीवनमा आफ्नो जीवनको श्रेष्ठ फैंसला गर्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो जीवन बनायौ भने सदाको लागि श्रेष्ठ बन्छौ। उल्टो सिँढी चढ्नबाट जोगिन्छौ। बापदादा खुशी हुनुहुन्छ– एक-दुईबाट अनेक दीपक जगाएर दीपमाला बनाइरहेका छन्। उमंग-उत्साह राम्रो छ। सेवामा व्यस्त रहनाले उन्नति राम्रो गरिरहेका छन्।
एक त निमित्त भावको कुरा सुनाएँ, दोस्रो जो सेवाको लागि निमित्त बनेका छन् तिनीहरूको लागि स्व उन्नति वा सेवाको उन्नति प्रति एउटा विशेष स्लोगन बचाउको साधन हुन्छ। हामी निमित्त बनेकाले जे गर्छौ हामीलाई देखेर सबैले गर्छन् किनकि सेवाको निमित्त बन्नु अर्थात् मञ्चमा आउनु हो। जसरी कुनै पार्टधारीले मञ्चमा आउँदा कति ध्यान दिएको हुन्छ। त्यसैले सेवाको निमित्त बन्नु अर्थात् मञ्चमा पार्ट खेल्नु हो। मञ्चतर्फ सबैको नजर हुन्छ। र, जो जति हीरो कलाकार हुन्छन् तिनीहरू माथि धेरैको नजर हुन्छ। त्यसैले यो स्लोगन बचाउको साधन हो। यसबाट स्वत: उड्तीकलाको अनुभव गर्नेछौ। त्यसो त चाहे सेन्टरमा छौ, चाहे बाहिर। सेवाधारी त सबै हौ। कतिले आफू निमित्त भएको स्थानमा रहेर सेवाको चान्स लिन्छन्, तिनीहरू पनि सेवाकै मञ्चमा छन्। सेवा सिवाय आफ्नो समयलाई व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। सेवाको पनि खाता धेरै जम्मा हुन्छ। सच्चा दिलले सेवा गर्नेहरूले आफ्नो खाता धेरै राम्रोसँग जम्मा गरिरहेका छन्। बापदादासँग हरेक बच्चाहरूको आदिदेखि अन्त्यसम्मको सेवाको खाता छ र अटोमेटिकली त्यसमा जम्मा भइरहेको हुन्छ। एक-एकको हिसाब राख्नु पर्दैन। हिसाब राख्नेहरूसँग धेरै फाइल हुन्छन्। बाबाको पासमा स्थूल फाइल कुनै छैन। एक सेकेण्डमा हरेकको आदिदेखि अहिले सम्मको खाता सेकेण्डमा इमर्ज हुन्छ। अटोमेटिकली जम्मा भइरहन्छ। यस्तो कहिल्यै नसोच– मलाई त कसैले हेर्दैन, जान्दैन। बापदादाको पासमा त जो जस्तो छ, जति गर्छ, जुन अवस्थाले गर्छ सबै जम्मा हुन्छ। फाइल छैन तर फाइनल छ। अस्ट्रेलियामा शक्तिहरूले बाबाको बनेर, बाबालाई पहिचान गरेर, बाबासँग स्नेह निर्वाह गर्नमा धेरै राम्रो हिम्मत देखाएका छन्। हलचल हुने भूल हुन्छ, त्यो कति स्थानको, धरनीको वा अघिल्लो जीवनको संस्कारको कारणले हलचल आउँछ। त्यसलाई पनि पार गरेर स्नेहको बन्धनमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसैले बापदादाले शक्तिहरूको हिम्मतको लागि बधाई दिनुहुन्छ। एक बल एक भरोसाले अगाडि बढाइरहेको छ। शक्तिहरूको हिम्मत र पाण्डवहरूको सेवाको उमंग दुवै पंख पक्का छन्। सेवाको क्षेत्रमा पाण्डवहरू पनि महावीर बनेर अगाडि बढिरहेका छन्। हलचललाई पार गर्नमा होसियार छन्। सबैको चित्र त्यही हो। पाण्डवहरूलाई मोटा, अग्ला र बलिया देखाउँछन् किनकि स्थिति यस्तो उच्च र मजबूत हुन्छ त्यसैले पाण्डवलाई उच्च र बहादुर देखाएका हुन्। अस्ट्रेलियाका रहमदिल पनि धेरै छन्। भट्किरहेका आत्माहरू माथि रहमदिल बनेर सेवामा अगाडि बढिरहेका छन्। यिनीहरू कहिल्यै सेवा विना रहन सक्दैनन्। बापदादालाई बच्चाहरूको अगाडि बढ्ने विशेषतामा सदा खुशी हुन्छ। विशेष भाग्यवान छौ। हरेक बच्चाहरूको उमंग-उत्साहमा बापदादालाई हर्ष हुन्छ। कसरी हरेक श्रेष्ठ लक्ष्यले अगाडि बढिरहेका छन् र बढिरहने छन्। बापदादाले सदैव विशेषतालाई नै हेर्नुहुन्छ। हरेक एक अर्का भन्दा प्यारो लाग्छ। तिमीहरूले पनि एक-अर्कालाई यही विधिले हेर्छौ नि! जसलाई हेर्दा पनि एक अर्को भन्दा प्रिय लाग्छन्। किनकि ५ हजार वर्षपछि बिछोडिएका आपसमा मिलेका छन् त्यसैले कति प्यार हुन्छ। बाबासँग प्यारको निशानी यो हो सबै ब्राह्मण आत्माहरू प्रिय लाग्छ। हरेक ब्राह्मण प्रिय लाग्नु अर्थात् बाबासँग प्यार छ। मालामा एक अर्काको सम्बन्धमा ब्राह्मणहरू नै आउँछन्। बाबाले त रिटाएर भएर हेर्नुहुन्छ त्यसैले बाबासँगको प्यारको निशानीलाई सदा अनुभव गर– सबै बाबाका प्रिय छन् त्यसैले मेरो पनि प्रिय छन्। अच्छा।
१– सबैले आफूलाई विशेष आत्मा सम्झन्छौ? विशेष आत्मा हुँ, विशेष कार्यको निमत्त हुँ र विशेषता देखाउनु छ– यो सदा स्मृतिमा रहोस्। विशेष स्मृतिले साधारण स्मृतिलाई पनि शक्तिशाली बनाइदिन्छ। व्यर्थलाई पनि समाप्त गरिदिन्छ। त्यसैले सदा यो विशेष शब्द याद राख्नु। बोल्नु पनि विशेष, देख्नु पनि विशेष, गर्नु पनि विशेष र सोच्नु पनि विशेष। हरेक कुरामा यो विशेष शब्द ल्याउनाले स्वत: नै बदलिन्छौ। र यही स्मृतिले स्व परिवर्तन र विश्व परिवर्तन सजिलै हुन्छ। हरेक कुरामा विशेष शब्द जोड्दै जाऊ। यसैबाट जुन सम्पूर्णता प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ, उद्देश्य छ त्यसलाई प्राप्त गर्नेछौ।
२– सदा बाबा र वर्साको स्मृतिमा रहन्छौ? श्रेष्ठ स्मृतिद्वारा श्रेष्ठ स्थितिको अनुभव हुन्छ? स्थितिको आधार हो स्मृति। स्मृति कमजोर छ भने स्थिति पनि कमजोर हुन्छ। स्मृति सदा शक्तिशाली रहोस्। त्यो शक्तिशाली स्मृति हो “म बाबाको र बाबा मेरो”। यही स्मृतिले स्थिति शक्तिशाली रहन्छ र अरूलाई पनि शक्तिशाली बनाउँछौ। त्यसैले सदा स्मृतिमाथि विशेष ध्यान रहोस्। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वत: भइरहोस्। स्मृति, स्थिति र सेवा तीनै समर्थ होस्। जसरी स्विच अन गर्दा उज्यालो हुन्छ, अफ गर्दा अँध्यारो हुन्छ त्यस्तै स्मृति पनि एउटा स्विच हो। स्मृतिको स्विच यदि कमजोर छ भने स्थिति पनि कमजोर हुन्छ। सदा स्मृति रूपी स्विचको ध्यान रहोस्। यसैबाट स्वयंको र सर्वको कल्याण हुन्छ। नयाँ जन्म भएको छ त्यसैले नयाँ स्मृति होस्। पुराना स्मृति सबै समाप्त होस्। यही विधिले सदा सिद्धि प्राप्त गर्दै जाऊ।
३– सबैले आफूलाई भाग्यवान सम्झन्छौ? वरदान भूमिमा आउनु, यो महान भाग्य हो। एउटा भाग्य वरदान भूमिमा पुग्ने मिल्यो, यही भाग्यलाई जति चाहन्छौ श्रेष्ठ बनाउन सक्छौ। श्रेष्ठ मत नै भाग्यको रेखा खिच्ने कलम हो। यसमा जति आफ्नो श्रेष्ठ रेखा बनाउँदै जान्छौ त्यति श्रेष्ठ बन्छौ। सारा कल्पमा भाग्यको रेखा बनाउने यही श्रेष्ठ समय हो। यस्तो समयमा र यस्तो स्थानमा पुगेका छौ। त्यसैले थोरैमा खुशी हुने होइन। जब दिनेवाला दाताले दिइरहनु भएको छ भने लिनेवाला किन थाक्ने? बाबाको यादले नै श्रेष्ठ बनाउँछ। बाबालाई याद गर्नु अर्थात् पावन बन्नु। जन्म-जन्मान्तरको सम्बन्ध छ भने याद गर्न किन मुश्किल हुन्छ? केवल स्नेह र सम्बन्धद्वारा याद गर। जहाँ स्नेह हुन्छ त्यहाँ याद नआओस्, यो हुन सक्दैन। भुल्ने कोसिस गरे पनि याद आउँछ। अच्छा।
मस्तकद्वारा सन्तुष्टताको चमकको झलक देखाउने साक्षात्कारमूर्त भव
जो सदा सन्तुष्ट रहन्छ, उसको मस्तकमा सन्तुष्टताको झलक सदा चम्किरहन्छ। उसलाई कुनै पनि उदास आत्माले देख्यो भने त्यो पनि खुशी हुन्छ, उसको उदासी मेटिन्छ। जसको पासमा सन्तुष्टताको खुशीको खजाना हुन्छ उसको पछाडि स्वत: सबै आकर्षित हुन्छन्। उसको खुशीको अनुहार चैतन्य बोर्ड बन्छ जसले अनेक आत्माहरूलाई यस्तो बनाउनेको परिचय दिन्छ। त्यसैले यस्तो सन्तुष्ट रहने र सबैलाई सन्तुष्ट गर्ने सन्तुष्ट मणि बन, जसबाट अनेकौंलाई साक्षात्कार होस्।
चोट लगाउनेको काम हो चोट लगाउनु र तिम्रो काम हो आफूलाई बचाउनु।